Six Pack Care တံဆိပ်စစ်စစ် 23 in One Sport Machine အထူးလျှော့ဈေး 75000 ကျပ်
| Myanmar Free Ads
/ Six Pack Care တံဆိပ်စစ်စစ် 23 in One Sport Machine အထူးလျှော့ဈေး 75000 ကျပ်
ဆော့ဖို့အတွက် အထူးတလည် Health Center တွေသွားဆော့ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် Six Pack Care Exercise Machine & Bike လေးနဲ့ အဆင်ပြေပြေ ဆော့နိုင်ပါတယ်.. ရေးထားတဲ့ Feature တွေကတော့-
📈 Body Builder အချိုးကျတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် တည်ဆောက် ဖို့၊ ကျစ်လျစ်လှပစေဖို့နဲ့ မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေး ပိုမို ကောင်းမွန် လာစေဖို့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးစုံကို စက်တစ်ခုထဲနဲ့ ပြုလုပ် နိုင်ပါတယ်။ တစ်ရက်လျှင် ၄၅မိနစ်ခန့် ပုံမှန် လေ့ကျင့် ပေးရုံဖြင့် မြင်သူ ငေးလောက်သော အချိုးအစားကျသည့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖန်ဆင်းပေးပါလိမ့်မည်။
🕐 Six Pack Care Exercise Machine စက်ကိုအသုံးပြုဖို့ အတွက် ဖြုတ်တပ်ချိန် ၅မိနစ် နဲ့ပြုလုပ်နိုင်သလို အသုံးပြုပုံကလဲ အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။
🔢အိမ်တွင် သိမ်းဆည်းဖို့နေရာကျယ်ကျယ်လဲမလိုသလို မိမိအသုံးပြုပြီးပါကပြန်ပြီးခေါက်သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
အိပ်ထမတင်ရာတွင် ကိုယ်ခန္ဓာ အကြီးအသေးနှင့် အင်အားပေါ်မူတည်၍ တွန်းကန်အားကို လိုသလို ထိန်းညှိနိုင်ရန် အားကောင်းသည့် စပရိန်၆ချောင်းပါရှိပြီး ၂ချောင်း၊ ၄ချောင်းသာ ထည့်၍လည်း သုံးနိုင်သဖြင့် အားနည်းသောသူများပါ အလွယ်တကူ လေ့ကျင့် နိုင်ပါသည်။ အိပ်ထ မ တင် ၂၂မျိုးကစားနိုင်ရုံသာမက စက်ဘီးနင်းသကဲ့သို့ပါ ခြေသလုံးကြွက်သားနှင့် ခါးအားကို လေ့ကျင့်ပေးနိုင်သောကြောင့် ၂၃မျိုး လေ့ကျင့်နိုင်သော စက်ဖြစ်ပါသည်။
ယခင် ဈေးနှုန်းကတော့ 85000ks ဖြစ်ပြီး ယခု သီတင်းကျွတ် Discount ဈေးနှုန်းကတော့ 75000 Ks ဖြစ်ပါတယ်. စိတ်ဝင်စားရင်တော့ 365 Online Shopping. 09 451689031, 09 787179972 ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်.. ***
ခြေဖဝါးလေးကို နှိပ်နယ်ပေးမယ့် ကျန်းမာရေးအနှိပ် ဖိန...
တိုင်းရင်းဆေးနည်းဖြင့် ဖော်စပ်ထားတဲ့ အာမခံ အူရှင်း...
စွယ်စုံ သုံး အနှိပ်စက်
Car massage cushion (ကားသုံး ကြောမှီ ခါးနှိပ်စက်)
တစ်ပွဲထိုး ဆံပင်အမြန်ဖြည့်ဆေး Minnow Full Hair Ins...
HD DVR portable ကားမှာတပ်တဲ့ ဗွီဒီယိုရိုက်စက်လေးပါ...
Slim & lift for boy အဆီကျ စွပ်ကျယ်
7 BREAK GEl Promotion လေးလာပါပြီနော်
Tummy Trimmer အိပ်ထမတင်စပရိန်
Emilay Best Whitening Softgel From USA
တစ်လုံးထိုး ခေါင်းစွပ်ဓာတ်မီး 1T6
Andrea Hair Growth Essence (အစွမ်းထက် ဆံပင်ပေါက်ဆေ...
ဂျပန် နည်းပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဗိုက်ချပ် ခါးသေးပြီ...
Six Pack Care တံဆိပ်စစ်စစ် 23 in One Sport Machine...
သွယ်လျ လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရရှိစေမယ့် X5 Slimming ...
Luma Smile သွားဖြူစက်
Air-con ခန်းတွင် အနေများသူများအတွက် အသားခြောက်ခြင်...
SLIM BODY Bamboo charcoal slimming suit ( ဂျပန် ဝ...